‘नयाँ युगको खोजी’–एक चर्चा
‘नयाँ युगको खोजी’–एक चर्चा
तोयानाथ उपेक्षित, चर्को राजनैतिक दवाव भोगेर पनि अदम्य साहासका साथ राजनैतिक परिवर्तनका मुद्धा स्थापित गराउन शसस्त्र द्धण्दमा सहभागि बनेका कवी नबराज मैनाली को पहिलो कृती ‘नयाँ युगको खोजी’ मेरो हातमा परयो ।
विक्रम सम्बत २०७१ मा प्रकाशित उक्त कृती मा २८ वटा कविता रहेछन । मझौला साईजको अलिक पातलो आकारमा प्रकाशित संग्रह भित्र खरा शव्दहरु, मिठो शिलशिला, विद्रोही भाव र प्रतिकात्मक प्रहार निक्कै ओजनिलो छ ।
भोगाईहरुले सोचाईहरुको जन्म गराउछ भने झै कवी मैनालीका कविताहरुमा भोगाईहरु प्रसस्तै छन । कवितामा कोठे साहित्य देखिन्दैन । उनका कविताहरुमा राजनैतिक परिवर्तन अघिका संर्घष, प्रतिवद्धता, विद्रोह, संकल्प र द्धृढ विश्वास पाईन्छन । राजनैतिक परिर्वतनपछिका विसंगति, विकृती र बेथिती माथिको असन्तुष्टि त्यतिकै पोखिएका छन ।
मायाप्रेम का कथाहरु, गितहरु गजलहरु मात्र साहित्य होईन, असली साहित्य त्यो हो जसले समाज परिवर्तनका लागि आव्हान गर्छ, विसंतीको विरुद्ध चेतना भर्छ र समाजलाई विचारले गोलबद्ध गर्दै शान्तिपूर्ण सर्घषका लागि आव्हान गर्छ, त्यतिले मात्र नपुगे शस्त्र वा अस्त्र प्रयोग गर्न साहित्य वा संगित मार्फत उत्प्रेरित गर्दछ । कवि मैनाली को नयाँ युगको खोजीमा तिनै कुराहरु पाईन्छन ।
सुनसरी जिल्लामा बसोबास गर्ने कवि मैनाली को बहुआयामिक व्याक्तित्व छ उनी राजनैतिक रुपमा जेलनेल भोगेका मानिस हुन यस मानेमा उनी हिजो धेरै राजनैतिक गर्थे तर आज साहित्यमा बढी रमाउन थालेका छन । राजनैतिक परिवर्तन पछि को परिस्थिती जसरी विकाश भयो त्यो उनलाई त्यति मन परेको छैन । उनले तिनलाई साहित्यबाट प्रहार गरिरहेका छन ।
नयाँयुगको खोजीमा सरिता शिर्षकको कविता उच्च स्तरको भाषा, भाव, शैली र सन्र्दभमा लेखिएको छ । उनका कविताहरु सवै एकसे एक छन यधपी सरिता एउटी सुन्दरी महिला मात्र होईनन यहाँ उनी प्रकृती पनि हुन । सरिता क्रान्ति हुन, उनी गन्तव्य हुन जब सम्म सरिता आउदिनन यहाँ कसैलाई चैन हुदैन । कवि सरिताको खोजीमा बेचैन छन ।
‘ए मान्छे ? तिमी कुन खेल खेल्दैछौ
कतै झुक्याउदैछौ की चिनारीलाई ‘?
कुर्शीको मान्छे शिर्षको यस कविताले राजनैतिकमा रंग फेर्ने छेपारे प्रबृतिलाई खबरदारी गरेको छ ।
पढनै पर्ने कविताहरुको सानो संग्रहमा ईतिहासले विर्सेको कमरेड, अलविदा मेरी प्रियतमा, कथा भित्रका कविता, मन फेरी रोयो युद्धको अनुभुती लगायत धेरै कविताहरु कवि मैनालीका निजी भावनाका रुपमा व्याख्या गरिन हुदैन । जनक्रान्तिमा सामेल लाखौ योद्धाका प्रतिनिधीमुलक अनुभुती कवि मैनालीले आफ्ना कृतिमा उतारेका छन ।
देश बाहिर रहने म जस्ता हजारौ युवाको मन छुन नयाँयुगको खोजी पढ्दा मात्र मैनाली प्रति अन्याय हुने ठानेर यहाँ एउटा पाठक भएर केही कुरा लेखे । समिक्षकहरु ले उनको कृति खोजेर पढन पर्छ र समिक्षा गर्न पर्दछ भन्ने मेरो आग्रह पनि छ । कवि मैनाली को कलम चलिरहोस । थप नयाँ कृतिहरु पढन पाईयोस हार्दिक शुभकामना ।
"ब्रम्हाजीलाई चिठ्ठी" (कविता)
​‘बिराना बाटाहरु’ (कविता )